abakhiqizi be-aluminium okusaphaza abasebenza e-oven eChina
I-200 ephezulu ye-2000 ^ i-XNUMXkg i-aluminium isikulufa sokuncibilikisa induction yokuphonsa nokuncibilikisa imihuzuko ye-aluminium, ingots, amathini nezinto ezibonakalayo.
I-aluminium yokuqothulwa kwesithando somlilo i-alnuminium izofaka izingxenye ze-aluminium noma i-aluminium ingot / isikhumba njengendlela yokukhokhiswa kwe-aluminium yokuqothula isithando somlilo bese iqala isithando somlilo sokuqala ukusebenza. Ukwengeza i-aluminium ngaphezulu ukukhokha le nqubo kuphakanyiswa ukuthi i-aluminium encibilikisiwe idlulisa ukushisa kangcono.
AIzinzuzo ze-aluminium isaka lokuncibilikisa lokungena lokungena:
Ukushisa kwe-electromagnetic ukukhishwa kwentuthuko nokuthuthukiswa nokukhula kobuchwepheshe, inqubo yokukhiqiza kanye nobuchwepheshe bezingxenye, isofthiwe, njengokuvikelwa okuthembekile kwamandla wamanje kungaba yi-2-300KW.
Umthamo wokuncibilika kwe-SMJD uchungechunge kagesi lwe-aluminium isaka lokuncibilikisa lokungena lokungena:
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi I-aluminium encibilikisa isithando somlilo, ukushibilika kwe-aluminium, i-aluminium isikulufa sokuncibilikisa isithando somlilo, umshini wokuncibilikisa we-aluminium, ukushibilika kwe-aluminium, indwangu ye-Aluminium yokuncibilikisa Imeyili kwemikhumbi